काठमाण्डौ । हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साढे ५ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर आज भदौ २० गतेबाट लिलामीमा राखेको छ। हाथवेले सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र मञ्जुश्री फाइनान्समा रहेको आफ्नो स्वामित्वको कुल ५ लाख ५१ हजार ९३४ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा सेन्चुरी...
मेरो माइक्रोफाइनान्सको लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लिलामीमा राखेको पौने ६ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज भदौ १६ गते अन्तिम दिन रहेको छ। संस्थाले गत भदौ ८ गतेबाट ५ लाख ८३ हजार ५९८ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। लिलामी सेयरमा आज बैंकिङ समयसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने धितोपत्र बिक्री...
प्रभु बैंकको २.५ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडको साढे २ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज भदौ १५ गतेबाट लिलामीमा राखिएको छ। बैंकको कुल २ लाख ५२ हजार ७२८ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिएको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकसँगै इच्छुक व्यक्ति तथा संगठित संस्थाहरुले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामी सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २१० रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । दुई वाणिज्य बैंकसहित चार कम्पनीका २ लाख कित्ता बढी सेयर आज भदौ ११ गतेबाट लिलामीमा राखिएको छ। प्रुडेन्सियल क्यापिटल म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको प्रभु बैंक, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्त र प्राइम कमर्सियल बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिएको हो । प्रभु बैंकको ५० हजार कित्ता,...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १.२२ लाख कित्ता बढी सेयर लिलामीमा राखिने, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको झन्डै १ लाख कित्ता बढी सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गरिने भएको छ। सनराइज बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १ लाख २२ हजार २८७ कित्ता संस्थापक सेयर यही भदौ १८ गतेबाट लिलामीमा राखिने भएको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थाकका साथै योग्य जोकोही व्यक्ति...
मेरोमाइक्रोफाइनान्सको पौने ६ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज भदौ ८ गतेबाट पौने ६ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। संस्थाले ५ लाख ८३ हजार ५९८ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनी तथा इच्छुक व्यक्ति तथा संगठित संस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामीमा राखिएको...
मेरोमाइक्रोफाइनान्सको झन्डै ६ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थापक समूहको झन्डै ६ लाख कित्ता सेयर आज (साउन २५ गते) बाट लिलामीमा राखेको छ। संस्थाले ५ लाख ९८ हजार ५९८ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा जोकोही इच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामी सेयरको...
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको ३ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । आईसीएफसी फाइनान्सको स्वामित्वमा रहेको फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ३ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज साउन २१ गतेबाट लिलामीमार्फत बिक्री खुलाइएको छ। फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको ३ लाख १९ हजार ४१० कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिएको हो। यो लिलामी सेयरमा संस्थाप सेयरधनी वा योग्य जोकाही व्यक्ति, कम्पनी तथा ...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको १ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले १ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज साउन १९ गतेबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले १ लाख ५ हजार ४१ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा योग्य जोकोही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य ३२५ रुपैयाँ...
अपी पावरको २.१५ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले अवितरित २ लाख बढी कित्ता हकप्रद सेयर आज साउन १३ गतेबाट लिलामीमा राखेको छ। कम्पनीले गत जेठ २० गतेदेखि असार १३ गतेसम्म हकप्रद निष्कासन गरेको थियो। जसमा बिक्री नभएको २ लाख १५ हजार ५९९ कित्ता सेयर कम्पनीले लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरमा इच्छुक जोकोही व्यक्ति, कम्पनी, संघ र संस्थाले...
अपी पावरको २.१५ लाख बढी कित्ता सेयर भोलिबाट लिलामीमा राखिने, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले अवितरित २ लाख बढी कित्ता हकप्रद सेयर भोलि साउन १३ गतेबाट लिलामीमा राख्ने भएको छ। कम्पनीले गत जेठ २० गतेदेखि असार १३ गतेसम्म हकप्रद निष्कासन गरेको थियो। जसमा बिक्री नभएको २ लाख १५ हजार ५९९ कित्ता सेयर कम्पनीले लिलामीमार्फत बेच्न लागेको हो। लिलामीमा राखिने सेयरमा इच्छुक जोकोही व्यक्ति, कम्पनी,...
प्रभु बैंकको २ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडको २ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर साउन १५ गतेबाट लिलामीमा राखिने भएको छ। बैंकको कुल २ लाख २ हजार १८६ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बेचिने भएको छ। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकसँगै इच्छुक व्यक्ति तथा संगठित संस्थाहरुले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामी सेयराको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २१०...